Otu esi akwụ ụgwọ na Paypal na Amazon | Nzukọ mkpanaka
Otu esi akwụ ụgwọ na Paypal na Amazon
Edere Ferreno | | Internet
Amazon bụ ụlọ ahịa kacha ibu n'ụwa na nde mmadụ na -azụ ahịa ebe ahụ kwa ụbọchị. Mgbe a bịara n'ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe n'ime ya, ị nwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe ha na Amazon site na iji PayPal, usoro ịkwụ ụgwọ ama ama. Ọ bụ ezie na inwe ike iji usoro ịkwụ ụgwọ a na ụlọ ahịa ama ama abụghị ihe dị mfe ma ọ bụ doo anya ka ọtụtụ ga-eche.
Nke bụ eziokwu bụ na ọnọdụ dịtụ mgbagwoju anya, n'ihi na teknụzụ ị ga -enwe ike iji akaụntụ PayPal gị kwụọ ụgwọ ịzụrụ ihe gị na Amazon. Agbanyeghị na nke a bụ ihe ga -ekwe omume na teknụzụ, anyị na -ahụ usoro ihe mgbochi n'ụzọ na -eme ka ọ dịrịghị mfe ịkwụ ụgwọ na akaụntụ anyị na ọrụ ịkwụ ụgwọ a.
1 Anyị enwere ike iji PayPal na Amazon?
2 Kaadị ego PayPal
3 Jiri kaadị onyinye kwụọ ụgwọ na Amazon
3.1 Tinye kaadị onyinye na Amazon
Anyị enwere ike iji PayPal na Amazon?
Dị ka anyị kwuru, ọ bụ teknụzụ ọ ga -ekwe omume iji PayPal na Amazon kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe gị. Agbanyeghị na anyị na -ahụ usoro ihe mgbochi nke anyị ga -awụli elu ka anyị nwee ike iji nhọrọ a mgbe anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe. Eziokwu ahụ bụ na enwere ihe mgbochi ndị a nwere ike bụrụ ihe na -eme ka ọtụtụ ndị achọghị iji nhọrọ a, mana ọ dabara nke ọma na usoro ahụ adịghị oke oke, n'agbanyeghị na ọ chọrọ ntachi obi.
Isi nsogbu bụ na Amazon anaghị akwado PayPal nwa afọ. Nke ahụ bụ, anyị enweghị ike ijikọ akaụntụ anyị na ọrụ ịkwụ ụgwọ ama ama n'ịntanetị na akaụntụ anyị n'ime ụlọ ahịa, ka anyị wee kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe na akpaghị aka n'ụzọ dị otu a. Nke a bụ ndọghachi azụ doro anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na gburugburu ụwa enwere ọtụtụ narị nde ndị ọrụ na -eji PayPal maka ịzụrụ ihe.
Na ihu ọma, enwere ụzọ iji nweta nke ahụ ọ ga -ekwe omume ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe na Amazon na ọrụ ịkwụ ụgwọ a. Yabụ ọ bụrụ na ọ dịrị gị mma iji akaụntụ PayPal gị mgbe ị ga -akwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe n'ịntanetị, mgbe ahụ ị ga -achọ ịma usoro ị ga -eso ka njikọ a wee nwee ike ma ọ bụ ka ị nwee ike iji akaụntụ gị.
Ugbu a anyị na -ahụ ụzọ abụọ bụ isi iji PayPal kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe na Amazon. Otu n'ime ha gụnyere iji PayPal Cash Card, ebe nke ọzọ chọrọ ka anyị zụta kaadị onyinye. Wayzọ abụọ a ga -enye anyị ohere iji usoro a kwụọ ụgwọ, n'agbanyeghị na ha bụ naanị patch iji kpuchie enweghị njikọta n'etiti ọrụ abụọ a, nke ka bụ nsogbu taa.
Kaadị ego PayPal
Ikekwe ọtụtụ n'ime unu maara echiche a. Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta akaụntụ PayPal gị bụ iji ihe a na-akpọ PayPal Cash Card, nke bụ ụdị kaadị Mastercard nke ejikọtara na akaụntụ gị n'elu ikpo okwu ịkwụ ụgwọ a. A nabatara kaadị a na ụlọ ahịa niile ebe anabatara Mastercard, n'etiti nke anyị na -ahụ Amazon, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ. Daalụ maka nke a, anyị nwere ike iji kaadị kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe, a ga -ewepụta ego ahụ na nkwụnye ego PayPal anyị, nke bụ ihe anyị chọrọ.
Onye ọrụ ọ bụla ga -enwe ike ịrịọ kaadị PayPal a, na mgbakwunye, usoro a bụ n'efu, maka ọdịmma onye ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ga -eji kaadị a n'ọdịnihu ịwepụ ego na igwe ndọrọ ego ATM, mgbe ahụ ị ga -ahụ ọnụ ahịa ụfọdụ, mana a bịa n'iji ya maka ịzụrụ ihe n'ụlọ ahịa (nke anụ ahụ na n'ịntanetị), ị gaghị enwe ọnụ ahịa ọzọ, ya mere ọ ga -arụ ọrụ dịka kaadị akwụmụgwọ nkịtị n'ọnọdụ niile.
Kaadị ego PayPal dị n'ọtụtụ mba, n'agbanyeghị na ọ bụghị ndị ọrụ ụwa niile ga -enwe ike iji ya. Na mgbakwunye, ọ ga -ekwe omume na ịnọ n'otu mba ebe a na -akwado kaadị a ma ọ bụ dị, dị ka na Spain, mana enwere usoro chọrọ ya, yabụ ọ nwere ike bụrụ ikpe na ịgaghị nwee ike ịrịọ ya. Enwere usoro dị mkpa achọrọ na itinye akwụkwọ maka kaadị a, ha bụ ndị a:
Nwee nọmba ekwentị jikọtara na akaụntụ PayPal.
Nwee adreesị ekwenyela / kwenye na akaụntụ PayPal gị.
Kwado ụbọchị ọmụmụ gị na njirimara gị n'elu ikpo okwu ịkwụ ụgwọ.
Enweghị nsogbu idozi n'ime akaụntụ ahụ.
Ọ bụrụ na i mezuru ihe ndị a chọrọ nke ikpo okwu ịkwụ ụgwọ na kaadị akwụmụgwọ dị na obodo gị, mgbe ahụ ị ga -enwe ike ịrịọ ya Yabụ na ị nwere ike iji ya kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe gị na nyiwe dị ka Amazon (na mgbakwunye na ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị). Ọ bụkwa ihe ị nwere ike iji na ịzụrụ ihe n'ụlọ ahịa anụ ahụ, ma ọ bụrụ na -ịchọrọ ma ọ bụ ọ dị mma karịa, na mgbakwunye na ịdọrọ ego na igwe ndọrọ ego.
Jiri kaadị onyinye kwụọ ụgwọ na Amazon
Kaadị ego PayPal bụ nke mbụ n'ime nhọrọ ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe na Amazon, mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe dịịrị onye ọ bụla, ọ ga -adabere na akụkụ ebe ị bi. Dịka anyị kwurula na mbụ, enwere usoro nke abụọ anyị nwere ike iji na ụlọ ahịa ịntanetị a ma ama. Usoro nke abụọ a bụ ịzụta kaadị onyinye Amazon, ihe anyị nwere ike ime site na ịkwụ ụgwọ PayPal. Ya mere, ọ ga-ekwe omume iji kaadị onyinye ndị a kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ ihe anyị na-eme na ụlọ ahịa ịntanetị ama ama mgbe niile. Ọ bụ ihe ga -ekwe omume, n'agbanyeghị na ọ bụghị dịka usoro gara aga ka nke gara aga.
Taa, anyị na -ahụ ọtụtụ ụzọ anyị ga -esi nwee ike jiri akaụntụ PayPal anyị zụta kaadị onyinye Amazon. Ọ ga -ekwe omume ịzụta kaadị ndị a n'elu ikpo okwu dị ka eBay, Dundle ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ. Yabụ na anyị ga -aga na ibe weebụ ahụ a na -ekwu maka ya, were kaadị achọrọ wee zụta kaadị ahụ wee jiri akaụntụ PayPal anyị kwụọ ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụrụ ihe n'ọdịnihu, anyị ga -emegharị usoro a oge ọ bụla anyị kwesịrị inwe ọtụtụ kredit ịzụta.
Mgbe ịzụrụ kaadị onyinye Amazon, anyị ga -akpachara anya ma họrọ naanị saịtị ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ọ bụrụ na anyị achọọ na Google anyị ga -ahụ na enwere ụlọ ahịa buru ibu ebe a na -ere kaadị onyinye ndị a, mana ọ bụghị ha niile nwere ntụkwasị obi. Na mgbakwunye, ọ kacha mma ịzụta kaadị mgbe niile maka ọnụ ahịa belatara. Ịkwesighi ịzụta kaadị onyinye nwere nnukwu uru, dịka euro 100 ma ọ bụ 200. Kama, anyị na -azụta otu maka ọnụ ahịa dị ala, belụsọ ma anyị chọrọ ịzụta ihe dị oke ọnụ.
Mgbe ịzụtara kaadị onyinye gị site na iji itule PayPal gị, ị nwere ike itinye kaadị onyinye a na akaụntụ Amazon gị n'ime nkeji ole na ole. Ọ dị mkpa ka anyị tinye ya na akaụntụ ahụ tupu anyị azụọ ihe, n'ihi na anaghị egosipụta kaadị onyinye ndị a mgbe anyị na -achọ ịkwụ ụgwọ. Yabụ, ọ bụrụ na anyị etinyegoro ya na akaụntụ mbụ, anyị na -ahụ na ọ ga -ekwe omume mgbe niile ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe site na iji ya.
Tinye kaadị onyinye na Amazon
Tinye kaadị onyinye a nke i ji akaụntụ PayPal gị kwụọ ụgwọ na akaụntụ Amazon gị dị mfe. Naanị anyị ga-eso usoro ole na ole, ka anyị wee hụ na edebanyela kaadị a na anyị nwere ike iji ya kwụọ ụgwọ maka ịzụrụ nke anyị chọrọ ịme na webụsaịtị ama ama. Usoro anyị ga -eso iji nwee ike itinye ya na akaụntụ anyị n'ụlọ ahịa bụ:
Banye na akaụntụ gị n'ụlọ ahịa.
Pịa aha gị n'elu aka nri ihuenyo ahụ.
Tinye ngalaba nke Akaụntụ gị.
Pịa na nhọrọ nke na -ekwu "Tinye kaadị onyinye na akaụntụ gị."
Tinye koodu kaadị onyinye a ị zụtara.
Pịa Tinye na itule gị.
Chere ka kaadị onyinye a gosipụta na akaụntụ gị.
Jiri kaadị a na ịzụrụ ihe ọ bụla n'ụlọ ahịa.
Nke a bụ usoro anyị kwesịrị ịgbaso mgbe niile mgbe anyị chọrọ ịgbakwunye kaadị onyinye na akaụntụ Amazon anyị. Yabụ, ọ bụrụ na anyị ga -azụta kaadị ugboro ole, nke anyị ga -akwụ site na iji akaụntụ PayPal anyị, anyị ga -emegharị usoro a oge niile. Ịdebanye aha kaadị ndị a na akaụntụ gị bụ ihe dị mma, na mgbakwunye n'ịhụ na oge niile ị nwere ike iji ya kwụọ ụgwọ na ọ nweghị onye ọzọ ga -eji ha, yabụ mgbe ọ bụla ịzụtara kaadị, denye aha ya na akaụntụ Amazon gị.
Maka ugbu a, ha bụ naanị nhọrọ anyị nwere ike ịrịọ arịrịọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ na Amazon na akaụntụ PayPal anyị. Enweghị njikọta n'etiti ikpo okwu abụọ a bụ nnukwu nsogbu ma na -akpata iwe n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ. Amabeghị ma nke a ga -agbanwe n'ọdịnihu, dịka njikọta enwere ike, mana maka ugbu a, anyị ga -agbarịrị ụzọ ndị a. Agbanyeghị na nke mbụ n'ime ha pere mpe, maka na ọ bụghị ihe enwere ike iji ya n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Internet » Otu esi akwụ ụgwọ na Paypal na Amazon
Lavasoft: kedu ihe ọ bụ na ihe mejupụtara ya
Otu esi achọta ma ọ bụ tọgharịa paswọọdụ Gmail